Saamaynta corona fayras: Dadka habeenkii ka taga Kenya ee taraawiilda kusoo tukada Soomaaliya - Tilmaan Media
Iyadoo bishaa barakeysan ee Ramadan ay ku dhowdahay bartamahaa, haddana dalal badan oo caalamka ka mid ah dadka ku nool ee Muslimiinta ah ma aysan helin masaajid ay taraawiixda iyo salaadaha kale ee waajibka ah ay ku tukadaan.
Waxaa jiro dalal dhowr ah oo Muslimiinta loo ogol yahay in ay masaajidda ku tukadaan. Soomaaliya na masaajidda badankooda si caadi ah ayey u furan yihiin.
Dalka Kenya oo Muslimiin badan ay ku nool yihiin, goobaha cibaadada lama ogola in la isugu tago, tallaabadaas oo saameysay Gobolka Waqooyi Bari, sida magaalada xudduudda ku taalla ee Mandera.
Dadkaas reer Mandera waxay billaabeen in ay u “gudbaan” dhinaca magaalada Baladxaawo si ay salaadaha jameecada halkaasi ugu soo gutaan kadib markii magaalada Mandera laga joojiyay gabi ahaanba in salaadaha lagu tukado misaajidyada iyadoo laga cabsi qabo xanuunka Coronavirus.
Dadka salaadaha u doonta Baladxaawo ayaa u badan “dhalinyaro salaadda Jimcaha iyo taraawiixda u doonta inay si jameeco ahaan ay ugu soo tukadaan dhanka Soomaaliya”, sida maamulka iyo dadka qaar ee gudba u xaqiijiyeen BBC Somali.
Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada reer Mandera ee Baladxaawo u gudubta si misaajidda magaaladaasi ee Soomaaliya ugu soo tukadaaan, waxuuna BBC-da u sheegay “inaysan ka maarmin salaada Jimcaha gaar ahaan xilligan bisha soonka lagu jirro.
Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri: “Anaga hadaan nahay reer Mandera kama maaranno salaadsa qudbada waayo dad muslimiin yaan nahay waxaa la jooga bisha soonka, dhalinyarada qaar oo aan aniga ka mid ahay, Balad-xawo ayaan aadnaa qudbada ayaan kusoo tukanaa, tarawiix kumajiro taasna wa waajib Alle subxaana watacaalaa uuna farayo”.
Wiilkan dhalinyarada ah ayaa intaasi raaciyay inay wadanka Kenya u soo duceeyaan inuu cudurkan Alle ka dulqaado.
Digniinta Maamulka Mandera
Maamulka Mandera ayaa uga digay dadka salaadaha u doonta dhinaca Balad-xaawo in la karantiili doono marka ay soo noqdaan, lana hayn doono mudo 14 maalmood ah, maadaama ay tageen “dal si weyn uu cudurka Corona uga jiro,” waxaa sidaasi BBC u sheegay Madaxa Caafimaadka Ismaamulka Mandera.
Qaar ka mid ah dadka xuduuda u gooya salaada darteed ayaa markii ay maqleen amarka dowlada joojiyay inay xuduudda ka gudbaan.
Dadka u gudba dhinaca Balad-xaawo ayaa xuduuda si nabad ah ku mara habeenkiina markay salaadaha soo tukadaanna dib ugu soo noqda dhanka Mandera xilli habeennimo ah. “Taa waxaa u fududeeyay in labada magaalo ay isku darsameen oo aan la kala garaneyn”, ayuu yiri qof la hadlay BBC.
Cabdilaahi Shukri oo ka mid ah dhalinyaro Baladxaawo u gudubta si ay salaada jamaacada ugu soo tukadaan waxuu yiri: “Waan joojinay hadda inaan Baladxaawo aadno maadaama dowladu ay dadka karantiilayso, reer Baladxaawo waa dad aad u jecel diinta”.
Falcelinta culimada Mandera
Qaar ka mid ah culimada Magaaladda Mandera ayaa ka hadlay dhalinyarada salaadaha u doonta dhinaca Baladxaawo ee ka gudubta xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
Sheekh Isxaaq Maxamuud oo ka mid ah culimadaas ayaa yiri: “Anaga reer Mandera hadaan nahay waxaan ka warqabnaa oo aad ulo socanaa ficilada ay dadka qaar sameynayaa ayagoo jabinaya awaamirta ama taloyiinka dowladda kasoo baxaya”.
Sheekh Isxaaq ayaa intaa ku daray in gudbidda ay tahay “ficil aan waafaqsanayn shareecada islaamka,” wuxuuna yiri: “Waa qalad inaad aado meel aad ogtahay inuu cudur ka jiro”.
Sheekha waxaa kaloo uu BBC-da u sheegay inuu arkay dad Baladxaawo u socda si ay taraawiixda ugu soo tukadaan.
“Aniga shaqsiyan wey isoo martay inaan arkay dad dhahaya ‘Baladxawo ayaan u soconaa’ waann ka celiyey, marka rabigiina ka baqa umada fitno ha usoo jiidina, hadda ayuu culeys na haystaa, culeys ka daran hanoo keeninna, nafsadina ha halaagina, guryahiin ku tukada, isku socodka hala joojiyo, dowlada aan la sheqeyno, dadka xuduudka ka gudbayo haloo sheego dowlada haloo gudbiyo”, ayuu yiri.
Labada Magaalo ee Mandera iyo Baladxaawo waxaa mudo dheer ay ahaayeen kuwo isku tiirsan xaga ganacsiga, waxbarashada iyo waliba dhaqdhaqaaqa shacabka oo boqolaal qof ay maalin walba labada dhinac u kala gudbayeen.
Trump: Coronavirus ayaa ka xun Pearl Harbor iyo 9/11